Isku xirayaasha Degaanka Deriska ah ee leh Khayraadka Guriyeynta
"Waxay ahayd mid aad u weyn oo la shaqeyneysa Ja'ne. Waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo xirfad leh. Waxay iga caawisay tallaabo kasta oo jidka ah. Haddii aysan jawaab ka helin wax ay i soo wici karto marka ay ogaato ... Anigu ma sheegi karo waxyaabo fiican oo ku saabsan iyada. " -ROSE GATZKE
Rose Gatzke ayaa ku noolayd gurigeeda Sims Avenue muddo 40 sano ah. Gurigii waxaa la dhisay 1884tii waxaana loo baahan yahay dayactir markii Ja'Na Dickens ay albaabka u garaacday. Ja'Na waxa uu si joogto ah u cadeeynayaa Saint Paul bariga bari. Maadaama Maamulaha Barnaamijka Guriyeynta ee Shirkadda Horumarinta Goobta Bariga, Ja'Na ay kormeerayso barnaamijka ESNDC ee barnaamijka kheyraadka ee khuseeya; Waxay ka caawisay Rose iyada oo loo marayo habsocodka codsiga ee dib-u-dhiska wadajirta Twin Cities, Habitat ee Bini'aadanka "Barnaamijka Burushka ah ee Naxariistiisa", iyo Sanduuqa Bulshada ee Saint Paul ee Kor-u-qaadida Deymanka Deymaha.
"Waxay ahayd mid aad u weyn oo la shaqeyneysa Ja'ne. Waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo xirfad leh. Waxay iga caawisay tallaabo kasta oo jidka ah. Haddii aysan jawaab ka helin wax ay i soo wici karto marka ay ogaato ... Anigu ma sheegi karo waxyaabo fiican oo ku saabsan iyada, "Rose ayaa sidaas yidhi.
Rose waxay heshay kursiga qubeyska, madaxa qubeyska lagu maydho, tubbada qubeyska, qaboojiyaha cusub iyo $ 24,000 oo amaah ah oo laga iibsado magaalada Saint Paul. Rose wuxuu u isticmaali doonaa lacag deyman ah oo lagu dari karo dayactirka guriga dibadiisa, daaqadaha cusub iyo armaajooyinka cusub ee jikada. Waxay ka mahad celineysaa qiimaha korodhka iyo nolol-maalmeedkeeda gurigeeda, iyo dhammaan kaalmada ESNDC.